KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Qarax ka dhacay Baladweyne iyo Khasaaro badan oo ka dhashay
Friday 7 December 2012 08:20
Qarax ka dhacay Baladweyne iyo Khasaaro badan oo ka dhashay
Baladweyne (KON) - Magaalada Baladweyne ayaa waxaa Xalay ka dhacay Qarax Khasaaro badan geestay oo lagula eegtay Ciidamada Itoobiyaanka iyo Ciidamda Soomaaliya.
Qaraxaan oo ka dhacay Isgooska Kalabeydhka Magaalada ayaa ku dhinteen 5 Askari oo Soomaali iyo Itoobiyaan iskugu jiraan waxaana ku dhaawacmeen ilaa iyo 10 kale.
Wararka ayaa sheegaya in Gawaari nooca dagaalka ah oo ay saarnaayeen ciidamo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan lala eegtey Qaraxaan oo ahaa Nooca miinada dhulka lagu Aaso.
Ciidamda Dowlada ayaa Ilaa Saakay ka wada Magaalada Howlgalo balaaran, ilaa iyo hadanah waxaa lasoo qabqabtay 20 Qof.
Ma jiro wax War ah oo kasoo baxa Maamulka Gobolka Hiiraan.